🎭 Emojis များသည် မတူညီသော ပလပ်ဖောင်းများတွင် အဘယ်ကြောင့် ကွဲပြားနေသနည်း။ | EmojiAll
Hot Keyword များ:
🎭 Emojis များသည် မတူညီသော ပလပ်ဖောင်းများတွင် အဘယ်ကြောင့် ကွဲပြားနေသနည်း။
မူလနေရာ » Emoji ဘလော့ဂ် စာရင်း
တူညီသော အီမိုဂျီများသည် မတူညီသော platform များတွင် ကွဲပြားသည်ကို သတိပြုမိဖူးပါသလား။
🔺: iOS (ဘယ်) နှင့် Android (ညာ) တွင် တူညီသော အီမိုဂျီများ၏ အသွင်အပြင် ကွာခြားချက်
အပေါ်ကပုံမှာပါတဲ့ ခြားနားချက်က အတော်လေးသေးငယ်ပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက တစ်ပုံစံတည်းမဟုတ်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ အလွန်ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတူညီတဲ့ platform တွေမှာ လုံးဝကို ကွဲပြားနေတဲ့ emoji တစ်ချို့ရှိပါတယ် (ဥပမာများကို အောက်ပါအကြောင်းအရာတွင် ဖော်ပြပေးပါမည်🤣)။
ဒါကြောင့် ဒီကွာခြားချက်က ဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲ❓ အရင်ဆုံး emojis တွေရဲ့ မူလအစကို သိဖို့လိုတယ်။
အီမိုဂျီများသည် 1990 ခုနှစ်များက စတင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ NTT DOCOMO အတွက် လုပ်ဆောင်နေသော အင်တာဖေ့စ်ဒီဇိုင်နာ 👨‍💻Shigetaka Kurita မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အီမိုဂျီများကို လွှင့်တင်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့သည် လူငယ်များကြားတွင် လျင်မြန်စွာ ရေပန်းစားလာပြီး platform များစွာတွင် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုအချိန်တွင်၊ မတူညီသော platform များမှ emojis များကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသဟဇာတဖြစ်စေရန် နည်းလမ်းမရှိပါ ❌၊ ထို့ကြောင့် လူများသည် အီမိုဂျီကို စကားလုံးများ လုံးထွေးဖြစ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် မပြသနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော platform များတစ်လျှောက် အီမိုဂျီပေးပို့သည့်အခါ ပြဿနာအချို့ရှိနိုင်သည်။ Emoji များသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ရေပန်းစားလာသည်နှင့်အမျှ 📈 ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ချက်များ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စာရေးစနစ်အများစုကို ကုဒ်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသော 2010 ခုနှစ်တွင် Unicode Consortium မှ Emojis များကို ယူနီကုဒ်တွင် ထည့်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုစီတွင် အီမိုဂျီများကို မိတ်ဆက်သည့်အခါ ပေါင်းစည်းထားသော ကုဒ်ကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိပြီး အီမိုဂျီ၏ဖြတ်ကျော်သည့်ပလပ်ဖောင်းတွင် လိုက်ဖက်ညီမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
🔺：ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ရှိ emoji တစ်ခုစီ၏ကုဒ်အမှတ်ကို သင်တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
ယူနီကုဒ်စံနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် အာရုံစိုက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ Unicode Consortium သည် emojis များ၏ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကုဒ်ရေးခြင်းအတွက် အဓိက တာဝန်ရှိပြီး emojis များ၏ အသွင်အပြင်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၏ တာဝန်မှာ 🫴 ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်၊ Unicode Consortium မှ အီမိုဂျီအသစ်ကို လွှင့်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်၊ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်နှင့် နမူနာပုံအပေါ်အခြေခံ၍ emojis အသစ်များ၏ အသွင်အပြင်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်လိမ့်မည်🖼။ မတူညီသောပလပ်ဖောင်းများတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အယူအဆများနှင့် ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်✨ ဖြစ်သောကြောင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော emoji များသည် ကွဲပြားသောအသွင်အပြင်များ ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောပလပ်ဖောင်းများသည် အီမိုဂျီဒီဇိုင်းတွင် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အချို့ကိုပင် ထည့်သွင်းပေးမည်၊ ဥပမာအားဖြင့် Apple သည် ပန်းသီးပင်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသူ John Chapman အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် "VOL X by John Appleseed" ဟူသော စာလုံးလေးဖြင့် Apple မှ ၎င်းတို့၏စာအုပ် 📚emojis လေးခုကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အမေရိကန်။
အောက်တွင် ပင်မပလပ်ဖောင်းများစွာ၏ ဒီဇိုင်းပုံများကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်။
Apple ၏ ဒီဇိုင်းသည် ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်❗ Apple ၏ အီမိုဂျီများသည် သုံးဖက်မြင်နှင့် လက်တွေ့ဆန်ပြီး အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်မှုမှာလည်း အလွန်သိမ်မွေ့ပါသည်။ အချို့သော အီမိုဂျီများသည် တကယ့်အရာများနှင့် နီးပါးတူသောကြောင့် လူတို့သည် ၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်ကို အခြေခံအားဖြင့် နားမလည်နိုင်စေရန် (သို့သော် အင်းဆက် အီမိုဂျီများသည် အမှန်တကယ် လက်တွေ့ဆန်ရန် မလိုအပ်ပါ 😭)။
လူအများသည် Apple ၏ အီမိုဂျီများနှင့်လည်း ပိုမိုရင်းနှီးကြသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ Apple သည် သုံးစွဲသူဦးရေ ပိုများပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Apple သည် အခြားပလပ်ဖောင်းများထက် နှစ်စဉ်ပိုမြန်သော emojis အသစ်များကို အမြဲထုတ်နေသောကြောင့် လူများစွာသည် Apple ၏ emojis💥 ကို ပိုမိုသဘောကျလာမည်ဖြစ်သည်။ Emojis များကို Apple မှ မွမ်းမံပြီး ချဲ့ထွင်သည်ဟု လူများစွာက ထင်မြင်စေသည် (အစကတော့ ဒီလိုပါပဲ🤐)၊ ဒါပေမယ့် NONONO🙅 အီမိုဂျီအသစ်တစ်ခုစီရဲ့ မွေးဖွားမှုက ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ- လူတွေက အီမိုဂျီအဆိုပြုချက်တွေကို တင်သွင်းပါ - Unicode Emoji ဆပ်ကော်မတီရဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် အဆိုပြုချက်များ - ပလပ်ဖောင်းများသည် အီမိုဂျီအသစ်များကို ထုတ်လွှတ်သည် ။(အကြံပြုထားသည့်စာဖတ်ခြင်း- 🐣 အီမိုဂျီအသစ်ပြုလုပ်နည်း။ )
🔺：Google ၏ emojis ဒီဇိုင်းနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
Google သည် Blob အီမိုဂျီကို 2013 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤအီမိုဂျီများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော fondant ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ပျော့ပျောင်းပြီး ပျော့ပျောင်းနေသောကြောင့် လူအများက ၎င်းတို့အား "ဂျယ်လီလူသား" သို့မဟုတ် "ပူတင်း" 🍮 ဟုခေါ်ကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ မတူညီသောပလပ်ဖောင်းများတစ်လျှောက် emojis များ၏အသွင်အပြင်ကို သိသိသာသာထိန်းထားနိုင်ရန် Google သည် ဤဒီဇိုင်းကို 2017 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အခြားသော platform များ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုမိုဆင်တူသည့် ဒီဇိုင်းကို လက်ခံခဲ့သည်။
Android စက်အများစုသည် Google ၏ အီမိုဂျီများကို အသုံးပြုကြသည်။
🔺：Microsoft ၏ emojis ဒီဇိုင်းနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Picture Spurce: https://docs.microsoft.com/)
Microsoft ၏ အီမိုဂျီအဟောင်းများတွင် အနက်ရောင်ဘောင်နှင့် ကာတွန်းဆန်သောပုံစံ🧸 ပါရှိသော်လည်း၊ 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သော Windows 11 အပ်ဒိတ်တွင် Microsoft သည် ၎င်း၏အီမိုဂျီများ၏ ယခင်စတိုင်ကို Fluent Design စတိုင်အသစ်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းအသစ်သည် ယခင်ပုံစံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားကာ အခြားသော ပလပ်ဖောင်းများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့်လည်း ပိုမိုနီးစပ်ပါသည်။
🔺：ယခင် Samsung emojis နှင့် အခြားသော platform များ၏ emojis များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Picture Source: Emojipedia)
Samsung ၏ အီမိုဂျီများသည် ယခင်အီမိုဂျီအချို့သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းသောကြောင့် အကြီးစားမွမ်းမံမှုတစ်ခုကိုလည်း ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
2018 တွင် Samsung သည် ၎င်းတို့အား မထူးခြားစေရန်အတွက် emoji များအားလုံး၏ ဒီဇိုင်းကို ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ သို့သော် ဒီဇိုင်းအသစ်သည် ခိုင်ခံ့သောကာတွန်းပုံစံကို ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။
နေရာအကန့်အသတ်ကြောင့် ဤနေရာတွင် တစ်ခုပြီးတစ်ခုမိတ်ဆက်မရနိုင်သော အခြားပလက်ဖောင်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက် ပလပ်ဖောင်းစာရင်းတွင် ပလက်ဖောင်းအားလုံး၏ ဒီဇိုင်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ⬇ ၎င်းတို့ကိုလည်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းများ ကွဲပြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများ
ပလက်ဖောင်းအားလုံးသည် တူညီသော emojis များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသော်လည်း၊ ဒီဇိုင်းများကြားတွင် ကွဲပြားမှုများများစွာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် လူများဆက်သွယ်ရန် emojis ကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသို့ ဦးတည်သွားတတ်သည်ကို ယခင်အကြောင်းအရာမှ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Samsung သည် ယခင်က 🙄 ကောက်ကွေးသောအပြုံးဖြင့် အဝါရောင်မျက်နှာငယ်လေးအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုသူအများအပြားသည် ဤအီမိုဂျီကို အပြုံးအီမိုဂျီအဖြစ် တလွဲအသုံးပြုကြသည်...
🔺：Samsung အီမိုဂျီဒီဇိုင်နာများ 💀ဘာတွေတွေးနေလဲသိချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အီမိုဂျီဒီဇိုင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် အပ်ဒိတ်လုပ်နေပြီး အီမိုဂျီတစ်ခုချင်းစီ၏ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု သို့မဟုတ် အီမိုဂျီစတိုင်တစ်ခုလုံး၏ အပ်ဒိတ်များဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီသည် ပလပ်ဖောင်းများ၏ ဒီဇိုင်းများကြားမှ ကွဲပြားမှုများကို တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းမြောင်းလာစေသည်။
ထို့အပြင် အခြားပြဿနာတစ်ခုရှိသေးသည်။ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသောအချိန်များတွင် အီမိုဂျီအသစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် အချို့သော အီမိုဂျီများသည် အချို့သော platform သို့မဟုတ် စက်များတွင် ကောင်းစွာမပြသနိုင်သည်ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
🔺: x ပါသော အကွက်များသည် မှန်ကန်စွာ မပြသနိုင်သော အီမိုဂျီများဖြစ်သည်။
ဤပြဿနာသည် အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်၊ နောက်မှအသေးစိတ်ဖော်ပြမည့် အခြားဘလော့ဂ်တစ်ခုရေးပါမည်။ စောင့်မျှော်ပေးကြပါ 🙇!
ယခု သင်သိပါပြီ၊ မတူညီသော platform များတွင် emojis များကို ကွဲပြားစွာကြည့်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ platform တစ်ခုစီတွင် emoji အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ပလပ်ဖောင်းများတစ်လျှောက် emojis များ၏ညီညွတ်မှုကိုသေချာစေရန်၊ ၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းများသည် အနာဂတ်တွင် ပို၍တူလာပေလိမ့်မည်၊ သို့သော် ယခုအခါတွင် emojis များသည် သုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်အတွက် platform များဖြစ်လာသောကြောင့်၊ ပလပ်ဖောင်းများသည် ဒီဇိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 🤹‍♂️။ ဘယ်ပလက်ဖောင်းရဲ့ ဒီဇိုင်းကို သင်အကြိုက်ဆုံးလဲ။ Comment မှာ ပြောပြပေးပါ။
Windows 11 နိုဝင်ဘာ 2021 အီမိုဂျီပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း
Google သည် Android O အသစ်အတွက် ၎င်း၏ဆိုးရွားသော blob emoji ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲနေပါသည်။
Samsung သည် ၎င်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ် အီမိုဂျီကို နောက်ဆုံးတွင် အဆင့်မြှင့်တင်နေသည်။
💬မှတ်ချက် : 15 လက်ရှိ ဘာသာစကား
2022-06-26 15:00:17 👍0 ပြန်ပြောပါ
2022-06-24 05:18:07 👍1 ပြန်ပြောပါ
2022-06-23 18:37:30 👍0 ပြန်ပြောပါ
2022-06-22 11:37:00 👍1 ပြန်ပြောပါ
2022-06-11 15:31:00 👍1 ပြန်ပြောပါ
2022-06-07 21:30:42 👍1 ပြန်ပြောပါ
2022-06-01 15:57:52 👍4 ပြန်ပြောပါ
2022-06-01 03:53:13 👍3 ပြန်ပြောပါ
2022-05-31 17:48:45 👍3 ပြန်ပြောပါ
2022-05-30 21:14:03 👍3 ပြန်ပြောပါ
🗣စကားပြောနေသည့် ဦးခေါင်း 🤍အဖြူရောင် နှလုံးသား 💙အပြာရောင် နှလုံး 💜ခရမ်းရောင် နှလုံး 🖕လက်ခလယ်
လူကြိုက်များသော Emoji （ဗမာ）
ပြုပြင်မွမ်းမံ: 2022-06-26 00:22:58 UTC
🇮🇷 နိုရုဇ် (အီရန်နှစ်သစ်ကူး)
❌ဘာလို့ Emojis တွေကို မမြင်ရတာလဲ။
👺👹 Goblin ဒါမှမဟုတ် Ogre? ရယ်စရာ ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု ဇာတ်လမ်းများ နောက်ကွယ်
📘Unicode Version ကဘာလဲ
👀အားလုံး Emojis 1858
🤔မျက်နှာ - လက်7
🤐မျက်နှာ - ကြားနေ - သံသယ13
😞မျက်နှာ - စိုးရိမ်ပူပန်26
🖐လက်ချောင်းများ - ပွင့်လင်း9
👌လက်ချောင်း - တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း9
👈လက် - Single- လက်ချောင်း7
👨‍🍳လူ - အခန်းကဏ္ role82
🎅လူ - စိတ်ကူး32
🐟တိရိစ္ဆာန် - အဏ္ဏဝါ11
🌴စက်ရုံ - အခြား15
🍄အစားအစာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်16
⛲နေရာ - အခြား17
⛽သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - မြေ50
🚢သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ရေ9
အီမိုဂျီဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များဆိုင်ရာ သုတေသန
အီမိုဂျီ ခံစားချက် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။
© မူပိုင်ခွင့် 2019-2022 EMOJIALL.com